Ezaka hampihenana ny fitohanan’ny fiara Alamina ireo mpivarotra amoron-dalana eny Anosibe
Nanentana sy nampiomana ireo mpivarotra amoron-dalana ao anatin’ny boriborintany fahefatra omaly maraina ireo tompon’andraikitra ao an-toerana.
Handamina sy hanao « alignement » an’ireo mpivarotra mantsy ny kaominina Antananarivo Renivohitra hanenana na hanafoanana mihitsy ny fitohanan’ny fiarakodia ao amin’ity Boriborintany iray ity. Hanomboka anio maraina ny asa raha ny fantatra ka eny amin’ny faritry ny lalamby sy Anosibe, hatreny amin’ny « rond point » farmasia Volahanta ,mandalo ny fivarotana angady no hisantarana izany. Izao no natao dia entina handaminana ny fifamoivoizana eny an-toerana sy hanamora ny fanamboaran-dalana. Polisin’ny tsena, miisa 15 lahy no nanatanteraka ny fanentanana sy ny fampiomanana omaly. Nanaiky ny fandaminana avokoa ireo mpivarotra tamin’ny ankapobeny. Hitohy eny amin’ny faritra Anosy ny asa aorian’Anosibe. Tafiditra ao anatin’ny Vinan’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana izao fandaminana izao ka ny tanjona dia “tanàna madio sy milamina”.